Inotakurika Mota Inokurumidza Kusimudza Kuwedzera Furemu
L3500L yakawedzera bracket, inowirirana neL520E / L520E-1 / L750E / L750E-1, inowedzera nzvimbo yekusimudza kumberi uye kumashure ne210mm, inokodzera marefu vhiri vhiri mamodheru.
Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza Kureba Adapter
Kureba Adapter yakakodzera kune mota dzine hombe clearance senge makuru maSUV uye matori emota.
Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza Mudhudhudhu Simudza Kit
Iyo LM-1 Motorcycle Lift kit yakasungirirwa kubva ku6061-T6 aluminium alloy, uye seti yemavhiri ekubata michina yakaiswa pairi. Uyai nemafuremu ekusimudza uye kurudyi kwekusimudza nekukurumidza pamwe nekuabatanidza kuti ave nemabhaudhi, wozoisa Chikwata cheMudhudhudhu kumusoro kwepamusoro pekusimudza nekukurumidza, uye vhara mativi ekuruboshwe nekurudyi nenzungu dzekushandisa.
Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza Rubha Pad
LRP-1 Polyurethane Rubber Pad inokodzera mota dzine clip dzakasungwa njanji. Kuisa clip yakasungirirwa njanji mumuchinjikwa-wakatemwa paburi reRubber Pad kunogona kudzikamisa kumanikidza kweiyo clip yakasungirirwa njanji paRubber Pad uye nekupa yakawedzera rutsigiro kumotokari. LRP-1 Rubber Pad inokodzera kune ese akateedzana eLUXMAIN Kurumidza kusimudza mamodheru.
Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza Wall Hanger Seta
Gadzirisa iyo Wall Hanger Set pamadziro nemabhaudhi ekuwedzera, uye wozosungirira iyo inokurumidza kusimudza paWall Hanger Set, iyo inogona kuchengetedza yako nzvimbo yekuchengetera uye kuita yako workshop kana garaji kuoneka zvakajairika uye zvakarongeka.
Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza AC akateedzana
LUXMAIN AC akateedzana Kurumidza kusimudza idiki, yakajeka, yakakamurwa mota kusimudza. Iyo yese seti yemidziyo yakakamurwa kuita maviri ekusimudza mafuremu uye imwechete simba unit, huwandu hwenzvimbo nhatu, dzinogona kuchengetwa zvakasiyana. Iyo imwechete furemu yekusimudza furemu, iyo inogona kutakurika nyore nemunhu mumwe. Iyo yakagadzirirwa vhiri rekudhonza uye vhiri repasirese, iyo iri nyore yekukweva nekugadzirisa musimudziso chinzvimbo. Chikwata chemagetsi chakashongedzerwa nemuchina wekuenzanisira we hydraulic kuti uone kusimudzira kunoenderana kwemafuremu ekusimudza mativi ese. Ose ari maviri magetsi unit uye mafuta cylinder haana mvura. Chero bedzi iri pavhu rakaomeswa, unogona kusimudza mota yako kuti igadziriswe chero nguva uye chero kupi.
Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza DC akateedzana
LUXMAIN DC akateedzana Kurumidza kusimudza idiki, yakajeka, yakakamurwa mota kusimudza. Iyo yese seti yemidziyo yakakamurwa kuita maviri ekusimudza mafuremu uye imwechete simba unit, huwandu hwenzvimbo nhatu, dzinogona kuchengetwa zvakasiyana. Iyo imwechete furemu yekusimudza furemu, iyo inogona kutakurika nyore nemunhu mumwe. Iyo yakagadzirirwa vhiri rekudhonza uye vhiri repasirese, iyo iri nyore yekukweva nekugadzirisa musimudziso chinzvimbo.
L-E60 Series Nyowani simba mota mota bhatiri rinosimudza trolley
LUXMAIN L-E60 akateedzana matsva emagetsi mota bhatiri rinosimudza trolley inotora michina yemagetsi-hydraulic dhiraivhu yekusimudza uye vakagadzirirwa mabhureki akasimudzwa. Ivo anonyanya kushandiswa pakusimudza uye kutakura kana bhatiri remagetsi remagetsi esimba matsva abviswa uye aiswa.
Imwe chete posvo ingroud kusimudza L2800 (A) yakagadzirirwa bhurocha-rudzi telescopic rutsigiro ruoko
Yakashongedzerwa nebridge-mhando telescopic rutsigiro ruoko kusangana nezvinodiwa zveakasiyana mavhiri emagetsi mamota uye akasiyana akasimudza mapoinzi. Mahwendefa ekudhonza pamativi ese maviri eruoko rwekutsigira anosvika 591mm pahupamhi, zvichiita kuti zvive nyore kuwana mota pamidziyo. Iyo nhovo ine yakagadzirirwa anti-kudonha muganho mudziyo, iri yakachengeteka.
Imwe chete post ingroud kusimudza L2800 (A-1) yakagadzirirwa X-mhando telescopic rutsigiro ruoko
Chikamu chikuru chiri pasi pevhu, ruoko uye kabati rinodzora magetsi zviri pasi, izvo zvinotora nzvimbo shoma uye zvinokodzera zvidiki zvekugadzirisa uye zvitoro zvekunakisa nedzimba kuti dzigadzirise nekukasika mota.
Yakashongedzerwa ne X-mhando telescopic rutsigiro ruoko kusangana nezvinodiwa zveakasiyana mavhiri emagetsi mamota uye akasiyana akasimudza mapoinzi.
Imwe chete posvo ingroud simudza L2800 (A-2) yakakodzera yekugeza mota
Iyo yakagadzirirwa X-mhando telescopic rutsigiro ruoko kusangana nezvinodiwa zveakasiyana mavhiri emagetsi mamota uye akasiyana masimudziro mapoinzi. Mushure mekunge chishandiso chadzoka, ruoko rwekutsigira runogona kumiswa pasi kana kunyura muvhu, kuti iyo yepamusoro yepamusoro yeruoko rwekutsigira inogona kuchengetwa ichimhanya nevhu. Vashandisi vanogona kugadzira hwaro zvinoenderana nezvavanoda.
Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Kaviri Post Inground Simudza, Imwechete Kuita Cylinder,